နင်လားဟဲ့ ပိုက်ဆံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » နင်လားဟဲ့ ပိုက်ဆံ
Posted by ငှက်ကလေး on Jun 4, 2012 in Drama, Essays.. | 21 comments
သူတို့သည် အမှိုက်ကောက်သမား ကောင်လေးနှင့် သူ၏အဖော် ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ညမှောင်ပြီး လမသာသော နေ့တစ်နေ့..
လမ်းမီးတိုင်အောက်ရှိ ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်ထိုင်ကာ သူတို့စကားပြောနေကြသည်။
“လောကမှာ ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးက ဘာလဲသိလား ဦးလေး”
“အောင်မယ် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘာတုန်း မင်းမုန်းတာက၊ အမှိုက်ပုံနားက ကြွက်တွေလား၊ ညစ်စုတ်စုတ် အနံ့ဆိုးတွေလား”
“တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်မုန်းတာက ပိုက်ဆံဗျ၊ ပိုက်ဆံ”
“ကြီးကျယ်လှချည်လားကွ၊ ငါတို့မှာတော့ ဒီပိုက်ဆံကို ကုန်းရုန်းရှာနေရတာ နေ့မအား ညမအားပဲ၊ နင့်မေကလွှား၊ မင်းကမုန်းတယ်ဆိုတော့၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားကွ”
ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဆိုက်လာသည်… “တပ်ထိပ်၊ စက်မှု့ဇုန်၊ … ဘီအိုစီ၊ သမကုန်း၊ အဝေးပြေးသွားမှာလာ၊ ရောက်တယ်လာ”
“ကျွန်တော်မုန်းတာ အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲဗျ၊ လောကမှာပိုက်ဆံဆိုတာကြီးသာမရှိရင် ဘယ်သူမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်နေ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ သာသာယာယာပဲ”
“ပိုက်ဆံမရှိမှတော့ အဲ့ဒီထမင်းဘယ်ကရမှာလဲ၊ ဆန်ဆိုင်တွေကလည်း ပိုက်ဆံမရရင် ဘယ်သူကရောင်းမှာတုန်း၊ ရုံးတွေမှာရော ပိုက်ဆံနဲ့ လခမပေးထားရင် ဘယ်သူကအားအားယားယား လာလုပ်မှာလဲ၊ ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတွေ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေရော ပိုက်ဆံမရရင် ဘယ်သူက အပင်ပန်းခံထုတ်လုပ်မှာတုန်း…၊ လူ့လောက ယန္တရားကြီးတစ်ခုလုံးက ပိုက်ဆံဆိုတဲ့လောင်စာ နဲ့လည်ပတ်နေတာကွ၊ ခြင်တွေကလည်း ကိုက်လိုက်တာ (ဖြန်း) ”
“ဟက်ဟက်၊ ဒါဆိုလောကမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ဘာလဲဗျ၊ ပိုက်ဆံတဲ့လား၊ ပိုက်ဆံမရှိပဲ ကျွန်တော်တို့ မရှင်သန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့လား၊ လူ့လောကထဲက ပိုက်ဆံကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ဗျာ၊ ဘာဖြစ်မတဲ့တုန်း”
“ဟကောင်ရ၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ လူတွေသုံးရစွဲရ၊ အပေးအယူလုပ်ရ အဆင်ပြေအောင် တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ ဟာပဲ၊ အဲ့ဒါကို မင်းကဘာလို့ ဖယ်ထုတ်ချင်ရတာတုန်း၊ ဖယ်ထုတ်စရာမလိုဘူးလေ၊ သူ့ဟာသူရှိနေတဲ့ဟာကို အလိုက်အထိုက်လေးအသုံးချသွားယုံပဲ၊ အဓိကက ပိုက်ဆံကိုခိုင်းစားတက်ဖို့ ပဲလိုသဗျာ”
တစ်ချက်တစ်ချက် လျှပ်စီးများလက်လာကာ မိုးခြိမ်းသံကလည်း သဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်သေး၏၊ ကြယ်တွေလည်း အိမ်ပျော်ကုန်ပြီထင်ရသည်…..
“ဒါဆို သူ့ထက်အရေးကြီးတာဘာလဲ၊ လောကမှာ အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲ ??”
“(တစ်ချက်ပြုံးရင်း) အရေးအကြီးဆုံးဆိုတာ ရှိဖို့လိုအပ်လို့လား၊ မင်းအခုဗိုက်ဆာနေတယ်မှတ်လား၊ ခုချိန်မှာ မင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးက စားစရာရဖို့ပဲ၊ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရသည် ဖြစ်စေ၊ ထမင်းကျန်ဟင်းကျန်ပဲ စားရသည် ဖြစ်စေ၊ အခုမင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးက ဗိုက်ပြည့်ဖို့၊ ရေဆာတဲ့ အချိန်မှာရေက အရေးကြီးတယ်၊ အိမ်သာတက်ချင်ရင် အိမ်သာက အရေးကြီးတယ်၊ အိမ်သာတက်ပြီးသွားပြန်တော့ ဆေးဖို့ ကြောဖို့က အရေးကြီးပြန်ရော၊ ပိုက်ဆံကတော်တော်တော့ အရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံရှိပြီး ထမင်းမရှိလို့ လည်းမဖြစ်၊ အိမ်သာအရမ်းတက်ချင်ပြီးမှ ၀မ်းချုပ်နေလို့လည်း မဖြစ်ဘူးမှတ်လား”
မိုးများတဖွဲဖွဲ ကြွေကျလာသည်၊ မိုးခြိမ်းသံခပ်ကျယ်ကျယ် တစ်ခုနားထဲသို့ဝင်လာပြီးနောက်၊ ရပ်ကွက်ထဲတွင် မီးပျက်သွားသည်…
“ဦးလေး ဒါဆိုဦးလေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးက ဘာလဲဗျ”
ဂျိန်းး.. ဂျလိမ်းး (မိုးခြိမ်းသံ)၊
ပေါက် ပေါက် ပေါက် (မိုးစက်များ မြေပေါ်ကျသံ)၊
၀ူးးး ဗလွမ်းး (ကားတစ်စီး ရေအိုင်ထဲကို ဖြတ်သွားသံ)
“အမိုးတစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ထီးတစ်ချောင်းပေါ့ကွာ ဟား၊ ဟား၊ ဟား….”
ထို့နောက်သူတို့သည် အမိုးရှိသော ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်အောက်သို့ပြေးဝင်သွားကြသည်။
ဘတ်စ်ကားတစ်စီးရောက်လာသည်၊ “မြန်မြန်လာမြန်မြန်လာ နောက်ကားပါတယ်၊ မောင်း မောင်း….”
ဘတ်စ်ကားကြီးသည် ပိုက်ဆံနောက်ကို အရှိန်ဖြင့်လိုက်သွားသည်၊ သူ၏ နောက်တွင် ပိုက်ဆံလုမည့် သူပါလာချေပြီ၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွင် ပိုက်ဆံလေးများ ရပ်စောင့်နေကြသည်၊ ထိုပိုက်ဆံလေးများသည် ပိုက်ဆံကြီးများထံတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း အိမ်ရှိပိုက်ဆံပိစိကွေးလေးများအတွက် ရှင်သန်နေကြသည် ဆိုပါလျှင်……
အရမ်းကောင်းတဲ့ပိုက်ဆံပို့ စ်လေးပါဗျာ။အတွေးသစ်လေးပါလား ကိုငှက်ကလေးရေ။
Kaung tel byar ! phat loz! Money change everything ( mostly ).
ဟိုးးးးးးးးးးးးးအောက်ဆုံးက…top Ten list ကြည့်ပါ..
etone (80234 Kyats ) တဲ့..
အဲဒီမှာ..80234 ဆိုတာ… ကိန်းဂဏန်းတခုပဲ..
ကျုပ်က.. ၁သိန်းပြည့်ရင်.. ငွေကျပ်တသိန်းထုတ်ပေးမယ်.. ကတိပေးထားတေ့ာ.. 100000 ဂဏန်းကနေ.. ကျပ်တသိန်းဖြစ်သွားတယ်..
တကယ်လို့.. မနက်ဖြန်ကျုပ်က..ကားတိုက်သေသွားရင်.. အဲဒီကိန်းကဏန်းက.. ဂဏန်းအတိုင်းကျန်ရစ်လိမ့်မယ်..
ပိုက်ဆံဟာ.. လူလူချင်း.. ကတိက၀တ်ကို.. နံပါတ်နဲ့သရုပ်ဖေါ်ထားတာပဲ..။
နေ့တိုင်း မေတ္တာပို့ရမယ့် လူထဲ … တစ်ယောက်တိုးလာပါပကောလား … ။
ဖလား ဖလား … သဂျီးမင်း ကျန်းမာပါစေ .. .ချမ်းသာပါစေ …. ဟိဟိ …
၈သောင်းဖိုး မေတ္တာပို့ တယ်ပေါ့လေ..
ကျုပ်ကတော့ မပို့ပေါင် ….
နိုင်ဂျံဂါးကနေရေးရင် တပြားမှ ပေးဝူး ဆိုပီး
ဒီကထုတ်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လုပ်ငန်းစရမှာမို့ပါ။
တန်ဖိုးတွေကို စက္ကူပေါ်တင်ပြီး အလဲအလှယ်လုပ်ကြတာပေါ့။ ATM စက်တို့ ဘာကတ် ညာကတ်တို့ သုံးရင်တော့ ကတိက၀တ်နဲ့ တန်ဖိုးတွေက နံပါတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့…
ပိုက်ဆံက တိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ ပေတံတခု ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတော့
ကြာတော့လဲ ဘာကိုဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ တိုင်းပြီး ပြောဖြစ်ဆိုဖြစ်တော့တာ….။
ငှက်ကလေးရေ .. ငွေဆိုတာမျိုးက … လိုက်လေ .. ပြေးလေ ..၊ ပြေးလေ လိုက်လေ …. အဲ ဟုတ်ပေါင် … အဲ့ဒါက မိန်းမ
ငွေဆိုတာမျိုးက … ကိုယ်က အပူတပြင်းနဲ့ လိုချင်စိတ်ပြင်းပျနေလျှင် …. လူကို ဆိုးဆိုးရွားရွား စိတ်ဒဏ်ရာ ပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ … ။ ဘ၀ရပ်တည်ချက်အတွက်ငွေလိုတာ လက်ခံပေမယ့် … လိုချင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေပါ ကပ်ပါလာခဲ့လျှင် … ရောင့်ရဲတင်းတင်းမှု မရှိတော့ပြန်ဘူး … ။
ပိုက်ဆံ ဆိုတာလေ … မရှိမကောင်း ၊ ရှိမကောင်းပါပဲနော် …. ။
ပိုက်ဆံ ကတော်တော်အရာရောက်ပါတယ်။ အိမှာမဟုတ်ပဲ အပြင်သွားရင်း အိမ်သာတက်ချင်ရင်လည်း အိမ်သာမြင်နေရပေမယ့် ပိုက်ပိုက် ပါမှကွဲ့။
ကိုငှက်ကလေးရဲ့ အတွေးကို သဘောကျမိသဗျာ ..
လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်နေတာ ရနေဖို့ပဲ ..
ပြီးတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် ကြားဖူးထားတာလေး ရှိသဗျ ..
အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာမှာပေါ့လေ .. ရှေးတုန်းက ..
ရွှေချောင်းတွေ ရွှေတုံး .. ငွေတုံးနဲ့ပဲ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာပေါ့ ..
တရုတ်နိုင်ငံမှာ စပြီး ငွေစက္ကူ ပိုက်ဆံကို စသုံးနေပြီတဲ့ဗျ ..
ဒါကို အီတလီ ခရီးသွား မာကိုပိုလိုက မြင်တွေ့ ခဲ့ရတယ်ဆိုပဲ ….
ကျုပ်ကြားဖူးတာတော့ ဒါပဲ ..
ဒီတော့ကာ ပိုက်ဆံနဲ့ သူ့ရဲ့လဲလှယ်မှု့စနစ်တွေက လူသားတွေအတွက် ဒီခေတ်မှာ မရှိမဖြစ်ပဲ။ ဒီမိုကရေစီရမှ နိုင်ငံကြီး အဆင်ပြေချောမွေ့မယ်၊ “ပိုက်ဆံ” ချမ်းသာမယ်၊ စာသင် ဘွဲ့ရမှ အလုပ်(ပိုက်ဆံ)ရမယ်၊ မေမေ့ကို ချစ်ရင် ပိုက်ဆံရှာရမယ်၊ ဒါမှမေမေ့ကို ပြုစုနိုင်မယ်၊ မကျန်းမာရင်ဆေးကုဖို့၊ အင်တာနက်သုံးဖို့၊ ဖုန်းပြောဖို့၊ စာအုပ်ဖတ်ဖို့၊ အလှူအတန်းလုပ်ဖို့၊ …….
ငွေ.. ငွေ.. ငွေ…
လူက ခြေနှစ်ချောင်း ရှိတယ်။
ငွေက ခြေလေးချောင်း ရှိတယ်။
ငွေက လိုက်လာရင်လည်း လူက ပြေးလို့ မလွတ်ဘူး။
ငွေက ပြေးသွားရင်လည်း လူက လိုက်လို့ မမီဘူး တဲ့။
(သဂျီးမင်း အလိုနဲ့တော့ ကိုက်ချင်မှ ကိုက်မယ်။)
ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ အားလုံးလိုနေကြတယ် ပိုက်ဆံပိုက်ဆံ ရှာရန်မလွယ်ဘူးကွယ်
ဒီအတွေးကို ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကနေရပါတယ်၊ ပိုက်ဆံအကြောင်းကို http://www.facebook.com/groups/132384953532028/ မှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်၊ ခုတလော တွေးမိတာလေးရယ်နဲ့ ပေါင်းပြီး နင်လားဟဲ့ ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးဖြစ်လာပါတယ်ဗျ